မုန့်ဖုတ်၊ အမြန်ထွက်ကုန်များ၊ ကျပန်းလမ်းစဉ် - သင် LIDL ၌စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်နားလည်ရမည့်အရာများ - သတင်း
မုန့်ဖုတ်၊ အမြန်ထွက်ကုန်များ၊ ကျပန်းလမ်းစဉ် - သင် Lidl ၌စစ်မှန်သောယုံကြည်သူတစ် ဦး ဖြစ်လျှင်သင်နားလည်ရမည့်အရာများ
Lidl ဆိုတာမင်းရဲ့ဘ ၀ ထဲကို ၀ င်လာတဲ့အခါအမြဲတမ်းအရာရာကိုပြောင်းလဲစေလိမ့်မယ်။ သင်နှင့်အမြင့်ဆုံး၊ တစ် ဦး musty ဂိုဒေါင်ထဲမှာ Techno ညဥ့်ကို Off? Lidl သည်ဘတ်စ်ကားခထက်လျော့နည်းသောပုဆိန်တစ်ပုလင်းနှင့်နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်ကိုပေးလိမ့်မည်။
နောက်တစ်နေ့မနက်မှာမင်းရဲ့ပါးစပ်ဟာဆာဟာရသဲကန္တာရလိုနိုးလာတဲ့အခါ Lidl ကိုပြန်သွားနိုင်ပြီးမင်းကဘဝတစ်လျှောက်လုံးရဲ့အမေ Gaia လိုပဲသင်ပျိုးထောင်လိမ့်မယ်။ မင်းကိုမင်း Monster Claw crisps၊ Potato Hoops၊ pesto နဲ့ခရမ်းချဉ်သီး focaccia ပေါင်မုန့်တွေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့ညနေ ၂ နာရီမှာသင်ဟာကြေးဝါတူရိယာတစ်ချပ်လိုလိမ့်မယ်လို့မဆိုလိုဘူး။ တကယ်လို့သင်လိုမယ်ဆိုရင် Lidl ကသူတို့ကိုတကယ်သိုလှောင်ထားတယ်။
သငျသညျအစား Asda တွင်တွေ့မြင်ခြင်းထက်သေဆုံးမလား? Lidl's Zinfandel မှသင်၏ Echo Falls နွေရာသီသစ်သီးများကိုသင်သိပါသလား။ Linda ဟာမင်းရဲ့အားလပ်ရက်အကြောင်းမင်းကိုကြိုတင်မှာကြားထားသလား။ ကောင်းပြီ, ထို့နောက်ဤဆောင်းပါးသည်သင်တို့အဘို့ဖြစ်၏။
သင့်ကိုအစေခံနေသောအမျိုးသမီးများသည်အမြဲတမ်း angular bob, streaky Blonde highlights နှင့် acrylic လက်သည်းများရှိသည်။ သူတို့သည်သင်၏ဟောင်းနွမ်းနေသောညစာလင်ဒါလင်ဒါကဲ့သို့နွေးထွေးပြီးရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်းသင်၏ပစ္စည်းများကိုအလျင်အမြန်မထည့်သွင်းပါကကော့တေးဝက်အူချောင်းနှင့် Frubes တို့သည်သင့်ကိုပျံသန်းလိမ့်မည်။ အမှန်စင်စစ်အမြင့်ဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှု။
ငါ၏အ LinkedIn သို့လိုင်းထည့်သွင်းစဉ်းစား Lidl ငွေရှင်းကောင်တာတွင်သူတို့ကိုစကင်ဖတ်နိုင်သကဲ့သို့ငါ့အစားအသောက်ဆိုင်တသမတ်တည်းထုပ်ပိုးနိုင်စွမ်းအကြောင်းကို။
- Thms Fnnng (@thmsfnnng) ပြီလ 3, 2016
Lidl ကိတ်မုန့်အပိုင်း။ မေမေမေ @_ScarletHarris pic.twitter.com/pbitDlwNys
- Toby Campion (@TobyCampion) သြဂုတ်လ 22, 2016
ဒီမိန်းကလေးဟာစာသားအရအနုပညာရှင်လိုဟန်ဆောင်နေသလိုပဲ။ ကျေးလက်ဒေသရှိမြေကွက်တစ်ကွက်၌အနံ့အရသာရှိသည်။ ငါလမ်းလျှောက်သွားတိုင်းငါလုပ်ချင်တာကအဖြူရောင်ရှုပ်ထွေးတဲ့ကျားပေါင်မုန့်ကိုငါ့မျက်နှာကိုလှိမ့်လိုက်တယ်။ Lidl သည် Bake Off ရာသီ9အတွက်လျှောက်ထားရန်လိုသည်။
Lidl ၏အိမ်တွင်းမုန့်ဖုတ်သရဖူတွင်လျှို့ဝှက်ကျောက်မျက်သည်ဤချယ်ရီနံပါတ်ကိုအလွယ်တကူ ပေး၍ အလွယ်တကူစားနိုင်သည်။ #sconewatch pic.twitter.com/qrApC9osMn
- စတီဗင်ဒိုဟာတီ (@Citycolt) အောက်တိုဘာလ 30, 2017
အကယ်၍ သင်သည်သင်၏ကျောင်းသားချေးငွေအားလုံးကို fags များနှင့်စာကြည့်တိုက်အခကြေးငွေများပေါ်တွင်သုံးစွဲသောအမျိုးအစားဖြစ်လျှင် Lidl သို့မဟုတ် Aldi သင့်အတွက်စူပါမားကတ် ၂ ခုသာရနိုင်သည်။
'Lidl ကပေါင်မုန့်ကအရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Aldi ဆီကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေယူလာရတာပိုကောင်းတယ်' pic.twitter.com/KXDS2BpzbH
- Dr. Nowt (@Dr_Nowt) ဇူလိုင်လ 13, 2016
Aldi ဟင်းသီးဟင်းရွက်များများရရင်ဘယ်သူကဂရုစိုက်မှာလဲ။ ငါ carbs> မုန်လာဥဆိုလို။ ဒါကအာလူးမဟုတ်ရင်ငါစိတ်အနှောက်အယှက်မဖြစ်ပါဘူး။
Lidl ၏အလယ်တွင်ကျပန်းအပိုင်းသည်ဘုန်းကြီးသောကျပန်း shit နှင့်ပြည့်နေသည်
သငျသညျ ravioli အချို့ရရန်အတွက်လမ်းလျှောက်နှင့် bongo ဗုံ, whiteboard, flux ကြိုးဝါယာကြိုးဂဟေဆော်ခြင်းနှင့်ဆံပင်ဖြောင့်နှင့်အတူထွက်လာ။ သင်၏ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးတွင် 'ဤအရာကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်လိုအပ်ပါသလား' ဟူ၍ ဘယ်တော့မျှမပြောပါနှင့်။ အဖြေကတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပေမယ့်သင်ကဒီဓာတ်ဆီမီးစက်ကိုသင့်တိုက်ခန်းကိုပြန်ဆွဲယူပြီးအဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါဆိုလိုတာကဒါက tenner ပါ။
Lidl ကိုချစ်တယ်။ သင်တစ် ဦး ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ဝယ်ယူရန်အဖြစ်ဓာတ်ဆီမီးစက်ကိုဝယ်နိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောစူပါမားကတ်။ pic.twitter.com/y1NpYDwjHP
အဘယ်အရာကိုစာအုပ် 365 DNI အပေါ်အခြေခံသည်
- Paul Rose (@mrbiffo) သြဂုတ်လ 5, 2017
ငါ့လည်ပင်း၊ ကျောကငါ့ pussy နှင့်ငါ့အက်ကြောင်း Lidl ။
ငါတို့ Lidl လုပ်တယ်
- Comp Fix (@Comp_fixbiz) အောက်တိုဘာလ 13, 2017
Ostriches ကိုစားတာဟာတရားဝင်လား။ သူတို့ကသင့်အားငါးနှစ်အရွယ်ကလေးအားတိရစ္ဆာန်ရုံတွင်ကြည့်ရှုရန်ယူထားသည်မဟုတ်လော။ Lidl က Deluxe ပရိုတိန်းတွေသိုလှောင်ထားနိုင်တယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကအနုပ်ဓာတ်မဟုတ်ပါဘူး၊ ကိုကိုမော့စ်အတုတွေ၊ အနံ့ဆိုးဒိန်ခဲနဲ့ကြက်သွန်နီမုန့်ထုပ်တွေ မှလွဲ၍ ဘာလုပ်ရမှန်းမသိသေးတဲ့နောက်မှာမင်းနောက်ကွယ်မှာအစဉ်အမြဲရှိနေလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖြစ်ကောင်း 99p များအတွက်အဲဒီမှာအတွက်လူ့နှလုံးဝယ်နိုင်ဘူး။ ဤအတောအတွင်း Waitrose သည်အလွန်စျေးကြီးပြီးသင်ပထမ ဦး ဆုံးမွေးဖွားသောသားကို muesli ၏တစ်ဝက်အိတ်အတွက်ပေးချေရန်သင်အမှန်တကယ်လိုအပ်သည်။
ငါ Lidl ကိုဘာလို့တန်ဖိုးမထားခဲ့တာလဲ။ pic.twitter.com/zLX0k6Z91F
- Charlotte Knowles (@CharlieelizzyK) အောက်တိုဘာလ 6, 2017
အခြားဆိုင်များကသင်ပိုမို ၀ ယ်ယူရန်သင့်ကိုအဆင်သင့်ဖြစ်စေရန်ဆိုင်ကိုထုတ်ထားရန်ထောင်နှင့်ချီ။ သုံးနိုင်သည်။ နို့ကိုနောက်ကျောနှင့်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ပစ္စည်းအားလုံးအားအမြင်အာရုံမှဖယ်ထုတ်ခြင်း။ ဒါပေမယ့် Lidl, ကောင်းပြီသူတို့အတူတူအရာအားလုံးကိုပုပ်စပ်, မျက်နှာဆေးကြောဘေးမှာ pesto ချပြီး။ ၎င်းသည်နေ့စဉ်နေ့စားတီဗွီဂိမ်းပြပွဲတွင်သင့်အားခံစားမှုဖြစ်စေသည်၊ 'စူပါမားကတ် Rush' ဖြစ်သည်။
ဒါဟာ lidl မဟုတ်သောအစားအစာရှင်းလင်းရေးရောင်း! 50p စသည်တို့အဘို့ပစ္စည်းပစ္စယနှင့်ပြည့်ဝသေတ္တာများ pic.twitter.com/l4kLCuf5
- စတိဗ် Dresser (@dresserman) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၁၁ ရက်
ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေဟာမင်းရဲ့အိတ်အောက်ခြေမှာတစ်နေ့လုံးဆူနေတဲ့အလားဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေပဲ။ EU သည်ရယ်စရာကောင်းသောမုန်လာဥနီများကိုဖယ်ရှားပစ်သောကြောင့် brexit အတွက်မဲပေးခဲ့ကြသူအားလုံးသည် Lidl ၏မျိုးရိုးဗီဇဟင်းသီးဟင်းရွက်များရွေးချယ်မှုကိုနှစ်သက်ကြသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအံ့ ch ဘွယ်သော chode ငှက်ပျောကိုကြည့်ပါ။
Mini ငှက်ပျောသီး! #lidl #lidlfruit
မျှဝေသည် Marina Ognyanova 4:36 pm တွင် PST မှာဇန်နဝါရီလ 10, 2017 ရက်တွင် (@ognianovamarina)
သူတို့ဟာအမှန်တကယ်နှိမ့်ချပြီးသူတို့ရဲ့အစားအစာဟာလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာမဟုတ်ပေမယ့်အပြာရောင်အမွေးကြီးထွားလာနေသလိုပြောင်းပြန်ကော်မာထဲမှာ 'လတ်ဆတ်' လို့ရေးထားတဲ့ဒီနိမိတ်လက္ခဏာကိုကြည့်ပါ။
အိုး @LidlUK တကယ်လား
အဘယ်ကြောင့်ကြောက်လန့်ကိုးကားအတွက် '' လတ်ဆတ် '' ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါတကယ်မလတ်ဆတ်ဘူးလား။ pic.twitter.com/JET6kGlk0s
- ␆ရှုံးနိမ့်သည်။ အာကာသထဲမှာ။ ␄ (@losttourist) အောက်တိုဘာ 25, 2016
လုံး ၀ သဒ္ဒါနည်းသောမမှန်ကန်ကြောင်းရေးသားရန်သာဤဆိုင်းဘုတ်များတွင်ထောင်နှင့်ချီ။ ကုန်ဆုံးခဲ့ခြင်းသည်အံ့သြစရာဖြစ်သည်။
အထူးသဖြင့်သင့်လက်မောင်း၌သင့်တွင်ဖိနပ်တစ်ထည်၊ မှည့်သောဖရဲသီး ၃ လုံးနှင့်walရာမအိတ်ကြီးများရှိသည်။ Lidl ကနေမင်းရဲ့ shit တွေအားလုံးကိုအိမ်နဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အခါ 'ကမ္ဘာပေါ်မှာတရားမျှတမှုမရှိဘူးလား'
သငျသညျ instagram အပေါ်ပုံနဲ့မတူပဲထို့နောက်ကြိုက်နှစ်သက်ပါလျှင်သူတို့သိရကြလိမ့်မည်
Lidl ကစျေးပေါမယ်၊ ဒါပေမယ့်သူတို့ကလုံးဝသန့်ရှင်းတဲ့အရာတွေရှိတယ်
စကော့တလန်ဆော်လမွန်မုန့်များကိုအခွံခွာပေးသည့် Manuka Honey၊ Deluxe Oak နှင့် Applewood ဆေးလိပ်သောက်ပြီး၎င်းသည်ကမကထပြုသောဆောင်းပါးပင်မဟုတ်ပါ။ သင်ဤအရာကိုသာသိရန်လိုအပ်သည်၊ ၎င်းသည်စင်ကြယ်သောမေတ္တာဖြစ်သည်။
သူတို့ဟာ Prosecco ကို£ ၃.၃၃ နဲ့ရောင်းပြီးလူတိုင်းက Surrey posh ကောင်မလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ
Proscco ကိုရောင်းချခြင်းဖြင့်ဤစျေးပေါသော Lidl သည်အခြေခံအားဖြင့်နိမ့်ကျသောဆိုရှယ်လစ်စနစ်ကိုကျင့်သုံးနေသည်။ အဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ဒါကငါတို့အားလုံးမှာ White Rovers တွေ၊ ဂျင်းဘောင်းဘီတွေ၊ ဘာဘာကုတ်တွေနဲ့သက်ကြီးရွယ်အိုတွူးဒါတွေလိုပြုမူလုပ်ဆောင်နိုင်တယ်လို့ဆိုလိုတာပဲ။ ဒါ beaut yah '။
ဟုတ်တယ် ... lidl ကိုသွားမယ် ... ခဏလေးတော့ prosecco ပုလင်းတစ်လုံးဝယ်လိုက်တယ် ... ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သောက်ခဲ့တယ် .......... .oops
- simona (@wolfstaring) ဒီဇင်ဘာလ 29, 2017
ထောင့်ကဆိုင်ကနေပေါင် ၂.၉၅ နဲ့ဘီယာလေးဘူးကိုရပြီးအိမ်ပြန်ရောက်ရင်အရက်မသောက်ဘူးလို့ထင်တဲ့အချိန်မှာမင်းအနိုင်ရတယ်လို့ထင်တာမကြိုက်ဘူး။
တကယ်လို့မင်းမှာပိုက်ဆံမရှိဘူးဆိုရင်တောင် Lidl ဆီကနေအဆင်သင့်ဝယ်ယူနိုင်တယ်
သင်၏ခရစ်စမတ်ငွေအားလုံးကိုဝီလျံဟေးလ်တွင်ဖြုန်းတီးခဲ့ပေမည်၊ သို့သော် Lidl သို့မည်သည့်အရာသို့ ဦး တည်သွားပြီးအချိုရည်မသောက်မီသင်ပေးနိုင်မည်နည်း။ ဟုတ်တယ် Gray Grey Greezy က Lidl ရဲ့ ၄၀% Rachmaninoff ဗော့ဒ်ကိုပေါင် ၉.၉၇ ပေးရတာနဲ့တူတယ်။
ငါ့ကို - ငါ့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုပိုပြီးဂရုစိုက်တော့မယ်။
ငါသည်လည်းငါ: ငှားရမ်းခနှစ်ပတ်များအတွက်ကြောင့်မဟုတ်ပါဘူးနှင့် Rachmaninoff Lidl အတွက်€ 12 သာ။ pic.twitter.com/pzuYL1FFwc
- ကြက်ဥအဖေ (0edipussy @) နိုဝင်ဘာ 16, 2016
ဒီဟာကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖ်စကားလုံးမှာ 90s clip art သုံးပြီးရေးခဲ့သလား။
သူတို့သည် Lidl တွင်မည်သည့်နေရာ၌မှရှာ။ မရနိုင်သောထိုကဲ့သို့သောလူဆိုးဂိုဏ်းများကိုရောင်းချကြသည်
ဒီဟင်းသီးဟင်းရွက်ကဘာလဲ။ ငါစားလိုက်ရင်သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ငါ့ကိုစိမ်းစိုစေမယ်၊ ပြီးတော့ငါထွက်လာပြီးနေရာတိုင်းမှာရှိတဲ့ပိုက်တွေအမြောက်အများထွက်လာလိမ့်မယ်။
ယနေ့ဤဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို Romanesaurus Rex အဖြစ်ကလေးများအားရောင်းချခဲ့သည်။ ကိုယ်ကြိုက်တယ်! Bravo! #Oaklands #Lidl pic.twitter.com/brc10Jw4sB
- စာရေးဆရာနည်းပြ (@ TuitionJS4D) စက်တင်ဘာ 12, 2017
နေရာတစ်ခုလုံးသည်ပန်းသီးနှင့်မြေပဲတောင်းများကဲ့သို့သောအရာဝတ္ထုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ Lidl bae ကြောင့်၎င်းအရာများသည်အစစ်အမှန်ကမ္ဘာတွင်တည်ရှိပြီးသင့်ဘဝကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်စေနိုင်သည်ဟုယုံကြည်သည်။
ငါ Lidl အတွက်ဂရိဒိန်ချဉ်ကိုရှာနေခဲ့သည်နှင့်ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး ကသူတို့က Icelandic Yoghurt နှင့်အတူကအစားထိုးင့်ကပြောသည် '' အတူတူပါပဲ။ '
- Joshua Garfield (@JoshuaGarfield) ဇန်နဝါရီလ 10, 2018
Lidl မှာစတော့ရှယ်ယာမှာယူသူနောက်ကွယ်မှာဘယ်သူလဲ။ သူတို့ pissed လား, သူတို့ရုံ bants အဘို့အရာတို့ကိုချွတ် ticking န်းကျင် scroll?
၄ င်းတို့၏ထုတ်ကုန်များကို 1p ဖြင့်ထာဝရလျှော့ချခြင်းအားဖြင့်ဤပရဟိတအသင်းသားများ၏လုပ်ရပ်အတွက်စာသားအတိုင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျွန်တော့်ကို Instagram မှာထားခဲ့တဲ့ရည်းစားဟောင်းဟောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျေနပ်ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
Asda သည်ခရစ်စမတ်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကိုအိတ် ၂၀p ဖြင့်ရောင်းချနေသည်။ သို့သော် Lidl က၎င်းတို့ကို 1p ဖြင့်လျှော့ချလိုက်သည် https://t.co/zP0DjHeNR8
- cardiffjournal (@cardiffjournal) ဒီဇင်ဘာလ 19, 2016
အရာအားလုံးသည်ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သော်လည်း Lidl သည်အမှန်တကယ်တည်ရှိပြီးဖြစ်သောအမှတ်တံဆိပ်များကိုရောင်းချနေသည်ဟုဟန်ဆောင်ရန်အလွန်ကြိုးစားသည်
သူတို့တရားစွဲမခံရသေးဘူးဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး။ ဆိုလိုတာက Cien ဟာ Head and Shoulders နဲ့တူတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ Cien Lidl ⬇ #အရေပြားထိန်းသိမ်းမှု # အလှကုန်ပစ္စည်းများ #beauty pic.twitter.com/owK70JPQJ7
- Silvia ♡ Kami ♡ (@estetistaexpat) သြဂုတ်လ 11, 2016
Lidl ၏ Dairylea Dunkers ၏အနည်းငယ်ပိုသာသောဗားရှင်း… pic.twitter.com/jSC6wy2G
- SophieMelia ။ (@_SophieM__) ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်
Lidl သည်ဤထုပ်ပိုးမှုနှင့်အတူမိမိကိုယ်ကိုသာလွန်ကောင်းမွန်စေပြီးနံနက်စာအမှတ်တံဆိပ်၏ထိပ်ဆုံးနေရာတွင်ရှိသည်။ # ဒီဇိုင်း pic.twitter.com/CM1MTjncpD
- မှ Ian Barnard (@Ian_Barnard) ဒီဇင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၃
သင် Lidl မဟုတ်သောအရာဖြစ်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။